भाईरसबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा कति सत्य ? यो पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोस - समय-समाचार
भाईरसबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा कति सत्य ? यो पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोस
७ बैशाख २०७७, आईतवार २१:१७
प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई लिएर, अहिले बिबाद भईरहेको छ । कतिले यसलाई भ्रमपूर्ण पनि भनेका छन । भाइरसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ यस्तो थियो –
त्यो भाइरस भनेको निर्जीव तत्व हो । यो निर्जीव तत्वमा त्यो जुन बोसीय, बोसोजस्तो जुन फ्याटीय तत्व हुन्छ, त्यसले त्यस (भाइरस) लाई एउटा जीवित तत्वका रुपमा सक्रिय गराइदिन्छ ।
त्यसकारण तातोपानीको बाफ लिने, तातोपानी खाने, चिसोमा बढी जोड नदिने, आइसक्रिमजस्ता कुरा नखाने विधि ठूलो कुरा हो ।
हात धुँदाखेरि, सकिन्छ भने तातोपानीले धुने । मुख धुँदा अलिकति तातोपानी, मनतातो पानीले । यो ठूलो विधि हो । जहाँ भाइरस छ भने पनि तातोपानीले हात धुने बित्तिकै त्यो भाइरसको, त्यसको बाहिरी लेयरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो, समाप्त हुन्छ त्यहीँ ।
मर्ने होइन, त्यसको जुन जीवतत्वको रुपमा त्यो बाहिरी लेयरको बोसीय तत्वले जे उपद्रो मच्चाउन सक्थ्यो, त्यो समाप्त हुन्छ ।
भाइसर किन मार्न सकिँदैनभन्दा निर्जीव तत्व हो, त्यसकारण । निर्जीव तत्वको, अब यो गीता ज्ञानतिर जानुपर्ने खतरा हुन्छ । यो निर्जीव तत्व हो, त्यसकारण यो निर्जीव तत्वलाई मार्न सकिँदैन । जसको जीवन छैन, त्यसलाई कसरी मार्ने ? त्यसकारण यो मर्दैन, यसलाई जीवित तत्वका रुपमा सक्रिय गर्ने इलिमेन्टहरू छन् । ती इलिमेन्टहरूबाट हामी मुक्त हुने हो ।
म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– मास्क मात्रै लगाएर पर्याप्त हुँदैन । मास्कसँगै चस्मा पनि लगाउनोस् ।
सबभन्दा बढी छिटो सर्ने मुखबाट, त्यसपछि दोस्रो आँखाबाट सर्छ । त्यसपछि मात्रै नाकबाट सर्छ । आँखाबाट झन् छिटो सर्छ । त्यसकारण चस्मा भरसक लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । अरु कुराहरु मैले धेरै भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।